RANT: Iza no tompon'ny domaino? | Martech Zone
Alakamisy, Septambra 30, 2021 Alakamisy, Septambra 30, 2021 Douglas Karr
Omaly, niaraka tamin'ny filankevitry ny orinasa isam-paritra aho ary nifanakalo hevitra momba ny fifindra-monina izahay. Ny sasany amin'ireo dingana ilaina dia mitaky fanavaozana ny firaketana ny domains sasany, ka nanontany aho hoe iza no afaka miditra amin'ny DNS an'ny orinasa. Nisy ny fijerena banga, dia nanao izany haingana aho a Fikarohana Whois ao amin'ny GoDaddy hamantatra hoe taiza no nisoratra anarana ireo domains ary iza ireo mpifandray voatanisa ao.
Rehefa nahita ny valiny aho dia tohina tokoa. Tsy izany no izy ihany ny fisoratam-peon'izy ireo, sampan-draharaha niara-niasa tamin'izy ireo.
Tsy azo ekena izany.
Andao hilalao lalao kely an'ny ahoana raha.
Ahoana raha mila manavao ny fikirakirana fisoratana anarana ho an'ny sehatra hafa ampidirinao ianao? Mila manao ve ianao mandoa ny antoko fahatelo anao manavao zavatra tokony hanananao? Tena nanao ity orinasa ity… ary ny masoivoho koa dia nanome vola azy ireo mihoatra ny vidin'ny fisoratana anarana isan-taona!
Ahoana raha ny fisoratana anarana amin'ny sehatry ny orinasa lany daty? Hitanay fa nitranga izany ary mila miady mafy ny orinasa hahalalana hoe iza no manana ny kaonty ary hanavao ny fisoratana anarana alohan'ny hanoratana azy amin'ny olon-kafa.
Ahoana raha manana faktiora ianao fifandirana na ady hevitra ara-dalàna amin'ny orinasa voatanisa ho mpisoratana ny fonenanao?
Ahoana raha mandeha ilay orinasa voatanisa ho mpisoratana anao tsy misy asa sa mangatsiaka ny fananan'izy ireo?
Ahoana raha ilay orinasa voatanisa ho mpisoratana anao atsahatry ny adiresy mailaka voatanisa ho tompon'ny sehatry ny orinasanao?
Marina izany… mety hiteraka olana aminao ny iray amin'ireo olana ireo! Amin'ity tranga manokana ity, ny mpanjifako dia nanambola dolara an-tapitrisany maro tamin'ny marika momba ny orinasany sy ny fahefan'ny domen'izy ireo an-tserasera nandritra ny roapolo taona lasa. Ny fahaverezana izay hisy fiatraikany lehibe amin'ny orinasan'izy ireo - ny fampidinana ny zava-drehetra avy amin'ny mailaka orinasany mankany amin'ny fanatrehany an-tserasera.
Tokony hanana ny fanananao na oviana na oviana alefa amin'ny antoko fahatelo… ao anatin'izany ny orinasa IT na masoivoho ivelany. Tahaka ny tsy hamelanao ny olon-kafa hanana ny hofan-trano fivarotanao na ny trosa arahin'antoka ao an-tranonao, ny fisoratana anarana amin'ny taninao no fanananao!
Ahoana ny fomba hijerena ny fisoratanao anarana amin'ny Whois
Whois dia serivisy ananan'ireo orinasan-tserasera fisoratana anarana ahafahanao mijery ara-batana na ara-drafitra ny fananana sehatra iray. Tadidio fa tsy ny fampahalalana rehetra dia ampahibemaso. Ny orinasa dia afaka manamarika ny tompony ho tsy miankina. Na izany na tsy izany, raha mijery ny mombamomba anao amin'ny fampiasana Whois ianao dia tokony ho afaka hilaza raha ao amin'ny kaonty fisoratana anarana ananananao (oh. GoDaddy), na raha tsy fantatrao ny orinasa na ny fisoratana anarana… atombohy ny fanarahana izay iza.
Ity misy santionany Iza vokany:
Valin'ny karoka WHOIS Domain Name: martech.zone Registry Domain ID: 83618939503a4d7e8851edf74f2eb7d0-DONUTS Registrar Server WHOIS: whois.godaddy.com URL Registrar: http://www.godaddy.com Daty nohavaozina: 2019-05-15T19: 41: 47Z Famoronana Daty: 2017-01-11T01: 51: 30Z fisoratana anarana Daty famaranana: 2022-01-11T01: 51: 30Z Registrar: GoDaddy.com, LLC Registrar IANA ID: 146 Mpanara-dalàna amin'ny fanararaotana fifandraisana amin'ny mailaka: abus@godaddy.com Fifandraisana amin'ny fanararaotana ataon'ny mpirotsa. Telefaona: +1.4806242505 Status Domain: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited Domain Status: clientRenewProhibited https://icann.org/epp#rliohibRenew Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Organisation registrant: DK New Media
Firenena / Faritany misoratra anarana: Indiana Registrant Country: US Registrant Email: Fanteno ny rohy contact Domain Holder ao amin'ny https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=martech.zone Tech Email: Misafidiana rohy Holder Contact Domain amin'ny https : //www.godaddy.com/whois/results.aspx? domain = martech.zone Admin Email: Safidio ny rohy Mifandraisa amin'ny Tompon'ny Domain amin'ny https://www.godaddy.com/whois/results.aspx?domain=martech.zone Name Server: NS09.DOMAINCONTROL.COM Server Server: NS10.DOMAINCONTROL.COM
Raha hitanao fa ny orinasa, adiresy mailaka (es), na orinasan-tsoratry ny fisoratana anarana dia mpanafika, maso ivoho na orinasa IT izay nokaramainao hitantana ny DNS anao, dia asao izy ireo hanova avy hatrany ny mpandraharaha sy adiresy mailaka miverina aminao ary alao antoka fa MITANAO ny kaonty fisoratana anarana sehatra izay nananganana azy ianao.
Aza adino, ny fisoratana anarana amin'ny sehatra rehetra dia misy fifandraisana isan-karazany mifandraika amin'izay hahafahanao manolotra ny fidirana amin'ny loharano ivelany na ny fahafaha-mahazo fampandrenesana amin'ny fanovana:
Registrant - iza no manana ny sehatra
Admin - mazàna, ny fifandraisana amin'ny faktiora ho an'ny sehatra
Tech - fifandraisana teknika izay mitantana ny sehatra (ivelan'ny faktiora)
Nahita orinasa vaventy very ny fonenany aho satria tsy fantatr'izy ireo akory hoe tsy tompony izy ireo tamin'ny voalohany, ny an'ny mpampifanaraka azy ireo. Ny iray amin'ireo mpanjifako dia tsy maintsy nitory ary nankany amin'ny fitsarana mba hamerenany ny sehatra misy azy ireo aorian'ny famelana ny mpiasa iray handeha. Ny mpiasa dia nividy ireo domains ary nanoratra azy ireo tamin'ny anarany, nefa tsy fantatry ny tompon'ny orinasa.
Avy hatrany dia nanamboatra mailaka tany amin'ny orinasa IT aho ary nangataka ny hamindrany ilay domaine amin'ny kaontin'ny tompon'ny orinasa. Ny valintenin'izy ireo dia tsy araka ny antenainao… nanoratra mivantana tamin'ny mpanjifako izy ireo ary nanoro hevitra fa mety ho tiako izany mametsy ny orinasa amin'ny alàlan'ny fametrahana ireo domains amin'ny anarako, zavatra iray aho na oviana na oviana nangataka.
Rehefa namaly mivantana aho dia nilaza tamiko ry zareo avy eo fa ny antony nitondran'izy ireo izany dia ny fitantanana ny sehatra arakaraka ny fangatahan'ny mpanjifa.
Raha nitazona ny tompon'ny orinasa ho registrant izy ireo ary nanampy ny adiresy mailaka azy ireo admin sy ny teknolojia contact, hanaiky aho. Na izany aza, nanova ny tena izy izy ireo registrant. Tsy milay. Raha nifandray tamin'ny faktiora sy ny admin izy ireo, dia afaka nitantana ny DNS ary nikarakara ny faktiora sy ny fanavaozana. Tsy nila nanova ny registrant tena izy ireo.
Fanamarihana: Fantatray ihany koa fa ny orinasa dia mitaky 300% mihoatra ny fanavaozana ny fisoratana anarana mahazatra, izay nolazain'izy ireo fa handrakofana ny fitantanana ny sehatra. Ary nampandoaviny izany vola izany 6 volana talohan'io ny fe-potoana fanavaozana.
Raha mazava dia tsy milaza aho fa ity orinasa IT ity dia nanana fandaharam-potoana ratsy. Azoko antoka fa ny fanaraha-maso feno ny fisoratana anarana an'ny mpanjifako dia nanamora ny fiainan'izy ireo. Mandritra ny fotoana maharitra, mety namonjy fotoana sy angovo aza izy io. Na izany aza, tsy azo ekena tsotra izao ny manova ny mailaka fisoratana anarana amin'ny kaonty.
Ahoana raha tianao ny hitantanan'ny antoko fahatelo ny domenanao?
Raha tsy manome endri-javatra momba ny orinasa ahafahan'ny mpampiaramiasa na mpitantana ao amin'ny fonenanao ny registrar anao
Misy fotoana tadiavin'ny orinasa antoko fahatelo hitantana ny sehatra misy azy ireo, koa ity misy ny manodidina. Matetika aho manangana ny orinasa a adiresy mailaka fizarana (oh. accounts@yourdomain.com) azon'izy ireo ampiana na esorina ny adiresy mailaka an'ny antoko fahatelo. Manampy amin'ny lafiny maromaro izany:
Azonao atao ny manampy sy manala ireo mpivarotra raha ilaina izany.
Izay rehetra amin'ny lisitra fizarana dia havaozina raha misy ny fanovana ny kaonty (ao anatin'izany ny fanovana ny teny miafina).
Soso-kevitra Pro: Aza atsangano amin'ny adiresy mitovy amin'ny fonenanao ny adiresy mailaka ataon'ny tomponao! Raha tapitra ny firaketana ny fisoratanao anarana na miova ny DNS, dia tsy ho azonao atao ny mahazo fampandrenesana mailaka! Ny ankamaroan'ny orinasa dia manana sehatra mihoatra ny iray mifandraika amin'ny orinasany… noho izany manangana lisitra fizarana kaonty amin'ny iray amin'ireo domains hafa.
Ny toro-hevitro ho an'ny fisoratana anarana an'ny orinasa orinasa
Nanoro hevitra ny mpanjifako aho mba hahazo a GoDaddy kaonty, soraty ny fari-tanin'izy ireo haharitra… folo taona… ary avy eo ampio ny orinasa IT ho mpitantana ahafahan'izy ireo miditra amin'ny mombamomba ny DNS izay ilain'izy ireo. Satria manana CFO ny mpanjifako dia nanoro hevitra ahy aho mba hanampy an'izy ireo ny fifandraisana amin'ny faktiora ary nampandre azy ny kaonty izahay mba hahazoana antoka fa voaloa mandritra ny fotoana maharitra ireo domains.
Ny orinasa IT dia mbola handray karama amin'ny fitantanana ny DNS, saingy tsy mila mandoa vola 3 heny azy ireo mihoatra ny vidin'ny fisoratana anarana. Ary, tsy misy atahorana ho an'ny orinasa izao fa tsy voafehiny ny fonenany!
Azafady mba zahao ny anaran'ny tranonkalanao ary alao antoka fa ny fananana dia eo ambanin'ny kaontin'ny orinasa misy anao. Ity dia zavatra tsy tokony hamelanao ny fifehezana amin'ny antoko fahatelo.
Zahao hoe Whois raha ny amin'ny fonenanao
Tags: fidirana amin'ny domainmpizara anaran-tsehatrafiainana manokana domaindomicile registrationgodaddyiza